Darpan Nepal – यस्ता छन् इन्टरनेटबाट छिटो पैसा कमाउने केही सजिला तरिका
१. धेरै जोखिम नहुने बाजी मिलाउने
यसमा हामीले बेटिङ साइटहरुले अफर गर्ने फ्रि बेटहरुबाट बेटिङ एक्सचेन्जमा म्याचिङ गरेर फाइदालिन सकिन्छ । मिलेको बेटिङले तपाईको रिस्क कम गर्छ । यसले तपाईलाई फ्रि बेट को मौका मिल्छ जुन मिलाएको खण्डमा २०० पाउण्ड सम्म आम्दानी गर्न सक्नुहुन्छ । यसलाई तपाई जति बेटिङ साइट छन् त्यतीले गुणन गर्नुहोस र तपाईले केही सय पाउण्ड सजिलै कमाउन सक्नुहुन्छ ।
२ अनलाइन सर्भे
विद्यार्थीहरुको लागि आफ्नो फुर्सदको समयमा अनलाइनबाट पैसा कमाउने एक धेरै नै लोकप्रिय तरिका अनलाईन् सर्भेहरुमा भाग लिने हो । रिसर्च कम्पनीहरुले सधै नयाँ सदस्यहरुलाई आफ्नो नयाँ उत्पादनहरुको परिक्षण र सर्वेक्षणमा भाग लिउन भन्ने चाहन्छन् । सर्भेमा भाग लिएर तपाईले केही मिनेट खर्च गरेर फर्म क्यासमा वा पुरस्कारहरु पाउन सक्नुहुन्छ । तपाईले कुनै सर्भेबाट त पाँच डलरसम्म कमाउन सक्नुहुन्छ ।
३. वेवमा केहीसर्च गरेर पैसा कमाउने
के तपाई अनलाइनमा आफुले गर्ने गरेको कामबाट पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ । यो अनलाईनबाट पैसा कमाउने सबैभन्दा सजिलो उपाय हो । यो नयाँ सोच क्युएमइइ डटकमले ल्याएको हो जसबाट तपाईले गुगल, बिङ्ग वायाहुमा सर्च गरेको पनि पैसा कमाउन सक्नुहुनछ ।
यसको लागि तपाईले आफ्नो ब्राउजरमा सामान्य एड अन इन्स्टल गर्नुुपर्छ त्यसपछि जब तपाईले सर्च गर्नुहुन्छ तपाईको नर्मल सर्चको साथसाथै केही स्पोन्सर्ड रिजल्ट आउँछ । तपाईले यसबापत पेपाल एकाउन्टबाट पैसा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ ।
४. अनलाइन मार्केटिङ ट्रेडिङ
स्टक बजार र मुद्राहरुमा लगानीको ऐतिहासिक तरिकाको धेरै मेहनत गर्न तपाईले पर्दैन् । अनि तपाई अब उल्फ अफ वाल स्ट्रिटका सेयर दलालहरुले जस्तो स्टक मार्केटमै गएर लगानी गरिरहन पर्दैन् । तपाईले अनलाइन मार्केट टे«डिङ प्ल्याटफर्महरुको मद्धतले यो सबै आफैले गर्न सक्नुहुन्छ । यसको लागि प्लस फाइभ हन्ड्रेड, इ टोरो जस्तो ठूला प्ल्याट फर्महरुबाट नयाँनयाँ अवसर प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ ।
५. आफ्नै वेवसाइट सुरु गर्नुहोस
आफुले कमाउनको लागि तपाईलाई वेवसाइट चाहिन्छ । यो यस्तो एक तरिका हो जसमा तपाईले सुतेको बेलामा समेत पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ ब्लु होस्टबाट वेवसाइट सुरु गर्न २० मिनेट भन्दाकम समय लाग्छ र यसको लागि धेरै खर्च पनि लाग्दैन् र यो जसले पनि गर्न सक्छ । तपाईलाई सुरुमा भिजिटर बढाउन सामाजिक सञ्जालमा केही मेहनत गर्नुपर्छ तयस पछि तपाईको साइटबाट पैसा कमाउनको लागि धेरै उपायहरु हुन्छन् ।
Previous Postशेरबहादुर देउवा र मोदीबीच हायात होटलमा भेटवार्ता Next Postतपाईलाई ग्यास्ट्रिक छ ? झुक्किएर पनि नखानुस् यी खानेकुरा